Avereno jerena ny LG G Pad 10.1 | Androidsis
Raha mieritreritra ny hahazo vaovao ianao Takelaka Android, tsara tarehy sy mora vidy Ary miaraka amin'ny masontsivana ara-teknika izay azo ekena kokoa ho an'ny mpampiasa Android mahazatra indrindra miaraka amin'ny tahan'ny vidin-kalita tsy azo resena, aza misalasala mandritra ny iray minitra ary tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity satria azo antoka fa hahaliana anao ny famerenana izay ho entinay jereo eto ambany.
Ny takelaka resahina dia ny LG G Pad 10.1, takelaka endrika lehibe iray, efijery 10,1 and ary miaraka amina processeur miavaka Qualcomm Snapdragon 400, Quad Core amin'ny hafainganana famantaranandro 1,2 Ghz ambony indrindra sy RAM an'ny gigabyte izay manome hery ampy fotsiny hanatanterahana ireo asa mahazatra indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa Android.
2 Ny tsara indrindra amin'ny LG G Tab 10.1
3 Ny ratsy indrindra amin'ny LG G Pad 10.1
modely LG G Pad 10.1 LG V700
efijery 10'1 "IPS 1280 x 800 vahaolana 160 ppi
processeur Qualcomm Snapdragon 400 Quad Core amin'ny 1'2Ghz
Fitahirizana anatiny 16 Gb tsy nizara
Fakan-tsary Rear 4'9 Mpx tsy misy FlasLED
Fakan-tsary aloha 1'2 Mpx
fepetra 260'9 x 165'9 x 8'9 mm
lanja Gramin'ny 523
vidiny 189 Euros
Ny tsara indrindra amin'ny LG G Tab 10.1
Tsy misy fisalasalana ny tsara indrindra amin'ity LG G Pad 10.1 ananantsika ity amin'ny vidin'ny terminal satria afaka mahazo takelaka Android 10 ″ iray manontolo miaraka amina processeur Snapdragon 400 izay mahavita tsara ao anatin'ireto fanapahan-kevitry ny efijery HD ireto isika, na dia tsy izany ihany no azontsika asongadina na asongadinina satria ohatra ny efijery IPS dia mampiseho loko feno tambiny vahaolana sy famaritana izay aharihary tanteraka ny fisongadinana sy ny tints mba hanomezana kalitao tsara indrindra amin'ny fanjifana bateria henjana tokoa.
Etsy ankilany, manana feo isika fa, na dia tsy manana hery henoina matetika amin'ny tontolo mitabataba aza, ny feo stereo sy ny kalitaony dia mahafinaritra amin'ny tontolo milamina izay kely ny tabataba any ivelany.
Hevitra lehibe iray hafa manohana dia hita amin'ny fampiharana LG manokana toy ny mahatalanjona Remote haingana izay mamela antsika fehezo ny fitaovana elektronika rehetra toy ny stereo, fahitalavitra, decoder TV nomerika amin'ny fanondroana azy fotsiny sy ny fisafidianana ny marika an'ny mpanamboatra ny fitaovana avy amin'ny lisitr'ireo fitaovana mifanaraka aminy. Afaka manasongadina ny anao koa izahay asan'ny fampisehoana roa izay ahafahantsika mihazakazaka fampiharana roa amin'ny fotoana iray, manitsy ny haben'ny efijery tsirairay ho an'ny rindranasa mihazakazaka tsirairay.
Iray amin'ireo fampiharana an'i LG manokana tafiditra ao amin'ity takelaka Android manaitra ity, dia hitantsika amin'ny anarany hoe QPair, fampiharana manaitra izay azontsika sintonina amin'ny finday avo lenta Android, izay hahafahantsika mifehy ny fampandrenesana voaray amin'ny finday avoakanay mivady mivantana eo amin'ny LG G Pad 10.1, Anisan'izany ireo antso sy hafatra voaray. Ity dia tsy isalasalana fa safidy tena tsara tafiditra ao amin'ny LG G Pad izay ahafahantsika mivoaka amin'ny finday avo lenta ary mifantoka amin'ny asa ataontsika amin'ny takelaka nefa tsy matahotra ny tsy hahita fampandrenesana, antso na hafatra manan-danja.
Farany fa tsy farany, mendrika ny hanasongadinana ny 8000 mAh bateria lehibe afaka manome antsika fahaleovan-tena tsy misy zavatra hafa ary tsy ambany noho ny eo anelanelany folo na iraika ambin'ny folo ora ny fampiasana efijery mitohy, ho fanampin'ny azy fahatsiarovana fitehirizana anatiny tsy misy fizarana izay mamela antsika hampiasa ny toerana rehetra misy amin'ny fametrahana ny rindranasa sy ny lalao.
Ny ratsy indrindra amin'ny LG G Pad 10.1
Anisan'ireo ratsy indrindra azontsika nanasongadinana ity LG G Pad 10.1 ity ny kinova Android ankehitriny izay napetraka izay tsy misy hafa fa ny Android 4.4.2 Kit Kat, na dia heverinay fa tsy niandry ela ny fanitsiana ireo tovolahy tao amin'ny LG sy fanavaozana ny Android Lollipop.
Etsy ankilany ary araka ny efa nolazaiko anao teo aloha, na dia manana kalitao tsara amin'ny tontolo milamina aza izy io, mamela betsaka ny irina amin'ny toerana be olona izay ilaintsika ampifandraisina headphones mba hihainoana ny atiny multimedia amin'ny toe-javatra mety indrindra.
Ny lafiny ratsy iray hafa misy azy ireo dia izy roa ny efijery IPS sy ny lamosiny mitafy dia andriamby maloto tokoa ary ambonin'izany rehetra izany dia ny misambotra ny dian'ireo dian-tananay amin'ny fampiasana isan'andro ilay fitaovana.
Famahana ny efijery HD
Fampiharana sy fiasa miavaka an'ny LG
Sarimihetsika tsy voatsabo izay mamela dian-tanan-tanana maro
Fiverenan-damosina manintona loto be dia be
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Avereno jerena ny LG G Pad 10.1, takelaka 10-inch manontolo latsaky ny 200 euro